I-Condo-Port yesimanje yase-Spain-Self-In-Gated - I-Airbnb
I-Condo-Port yesimanje yase-Spain-Self-In-Gated
Port of Spain, Diego Martin Regional Corporation, i-Trinidad ne-Tobago
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Omar
U-Omar Ungumbungazi ovelele
I-condo icishe ibe yimizuzu emi-2 ungene e-Carenage emgwaqeni omkhulu osentshonalanga...eduze kwaseMassy Stores-Glencoe, ezitolo e-West Mall, e-Movie Towne, “i-avenue”-Woodbrook, kanye nedolobha lasePort of Spain. Ilungele ukuhlala kwe-carnival, noma uma unebhizinisi ePort of Spain.
I-condo isendaweni enesango. Inamagumbi okulala amabili anomoya opholile anamagumbi okugeza ayi-en suite. Inendawo yokuhlala evulekile evula kuvulandi. Ikhishi lihlome ngokugcwele isitofu sikagesi, isiqandisi, imicrowave, iwasha nesomisi ukuze kube lula kuwe. Igumbi lokuhlala line-TV yesikrini esiyisicaba esingu-55 intshi. Kukhona ukupaka imoto eyi-1 kanti ukungena enkomponi kungesango le-electronic. Isakhiwo sivalwe ngonogada wamahora angama-24 phakathi nesonto.
4.94 · 84 okushiwo abanye
I-Carenage yindawo yokuhlala etholakala enyakatho-ntshonalanga yeTrinidad. Ifulethi licishe libe yimizuzu emi-2 ukusuka e-Highland Plaza (iMassy Stores, Subway, Pizza Boys), eGlencoe. Sicela uhlole ibhuku lami lokuqondisa ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
Busy professional, loves to travel and explore.
Ngitholakala ngombhalo, WhatsApp noma i-imeyili. Ngicela ungazise uma kukhona okudingayo.
UOmar Ungumbungazi ovelele